In kasta oo inta badan ee aan u qornay shirkadaha ay yihiin fikrado hoggaamin hoggaamineed, ka jawaabidda su'aalaha inta badan la isweydiiyo, iyo sheekooyinka macaamiisha - nooc ka mid ah waxyaabaha ayaa taagan. Hadday tahay baloog qoraal ah, xog-warran, joornaal ama xitaa fiidiyoow, waxyaabaha ugu fiican ee waxqabadku sheegayaa sheeko si fiican loo sharraxay ama loo muujiyey, oo ay taageerayaan cilmi-baaris. Sawir gacmeedkan ka socda Kapost ayaa runtii wada jiidaya waxa sida ugu fiican u qabta waana tusaale fiican… isku darka farshaxanka
Isbeddellada ku saabsan Qorista Suuqgeeyayaasha Mawduucyada
Waxaan ku barakaynay wakaaladeena cilaaqaad weyn oo aan la leenahay xirfadlayaal suuq-geyn ah - laga bilaabo kooxaha tifaftirka ee shirkadaha shirkadaha, cilmi baarayaasha dibedda iyo baloogyada, ilaa qorayaasha hoggaanka fikirka madaxa bannaan iyo qof kasta oo u dhexeeya. Waxay qaadatay toban sano in la isku keeno ilaha saxda ah waxayna qaadataa waqti in la waafajiyo qoraha saxda ah iyo fursada saxda ah. Waxaan ka fikirnay inaan qoro qoraa dhowr jeer - laakiin shuraakadayada waxay qabtaan shaqadan cajiibka ah oo aanan waligeen sameyn doonin
Cirfiidyada Suuqgeyntii Hore, Hada iyo Mustaqbalka
Axad, Disembar 22, 2013 Thursday, April 1, 2021 Douglas Karr
Sannad kasta waxaan la halgamayaa in aan qoro saadaal ama aan kor u qaado qof kale. Kapost ayaa isku duba riday xogtan - Ruuxiyiintii Suuqgeyntii Hore, Joogtada & Mustaqbalka: Ujeedada aan kahelayno waxay ahayd inaan sawir ka qaadno wixii la soo dhaafay, imminka, iyo mustaqbalka fog ee suuqgeynta. Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay Saadaashu aniga ayay i khusaysaa maxaa yeelay waxay dejin karaan rajo aan si fudud u mira dhali doonin. Waxaan aaminsanahay
Kapost: Wadashaqaynta Mawduuca, Soosaarka, Qaybinta, iyo Falanqaynta
Jimco, Nofeembar 8, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kuwa ka ganacsada waxyaabaha ka ganacsada, Kapost waxay siisaa barxad ka caawisa kooxdaada wada shaqeynta iyo soo saarida waxyaabaha, socodka shaqada iyo qeybinta waxyaabahaas, iyo falanqaynta isticmaalka maaddada. Warshadaha nidaamsan, Kapost sidoo kale waxay waxtar u leedahay bixinta raadinta hanti dhowrka waxka beddelka iyo oggolaanshaha. Waa tan muuqaalka guud: Kapost wuxuu ku maareynayaa tallaabo kasta oo geeddi-socodka ah hal madal: Istaraatiijiyad - Kapost waxay bixisaa qaab shaqsiyadeed oo aad ku qeexdo marxalad kasta oo
Diyaargarowga Mawduucyadu Diyaar Ma U Yihiin Burburka?
Daraasad cusub oo ay soo dirtay Kapost oo ka socota kooxda Aberdeen, cilmi-baadhis ayaa lagu ogaaday in suuqleyyaal yar oo dareemaya inay si ku filan u soo saarayaan una daba galayaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Farqiga looga faa'iideysan karo ayaa ka dhex muuqda hoggaamiyeyaasha mawduucyada iyo kuwa raacsan. Kapost waxay ku baaqeysaa xilliga kala guurka oo dalabku aad u badan yahay laakiin qorsheynta caqliga leh ay gabaabsi tahay Fowdo Mawduuc. Waxay naqshadeeyeen macluumaadka hoose si ay u dhigaan caqabadaha muhiimka ah (iyo faa'iidooyinka) si loo dejiyo istiraatiijiyad hawlgallada mawduucyada si wanaagsan loo hagaajiyay. Iyada oo dhan